“Man City wali waxay u baahan tahay 20 ama 30 sano kale si ay ugu guuleysato Champions League” – Guardiola – Gool FM
“Man City wali waxay u baahan tahay 20 ama 30 sano kale si ay ugu guuleysato Champions League” – Guardiola
(Yurub) 12 Maarso 2019. Pep Guardiola ayaa ku guuleystay Champions League hal jeer isagoo ah ciyaaryahan, wuxuuna 2 jeer kale ku guuleystay isagoo ah macalinka kooxda Barcelona.
Laakiin Guardiola ayaan kooxdiisa haatan ee Manchester City, ku guuleysan tartanka Champions League, wuxuuna ku andacooday in Sky Blues ay wali caruur ka tahay tartankan xiisaha badan.
Manchester City oo marti u ahayd kooxda Schalke 04 kulanka lugta hore wareega 16-ka tartanka Champions League ayaa guul ku soo gaartay 3-2, waxayna maanta kulanka lugta 2-aad ku ciyaari doonaan Etihad Stadium.
Laakiin macalinka reer Spain ayaa kahor kulankan shir jaraa’id uu kasoo muuqday wuxuu ku sheegay inaysan habooneyn in uu ku fikiro xiligan in kooxdiisa ay ku tartami karto ku guuleysiga Champions League isla markaana ay tahay xili hore.
“Waxaan sameyn karnaa inaan qaadno talaabe kale xili ciyaareedkan, laakiin Manchester City waxay u baahan tahay 20 ama 30 sano kale”.
“Ma diidi karno haddii aan gaarno marxalado heer sare ah ee ku aadan tartankan, waxay noqon doontaa tallaabo dheeraad ah”.
“Laakiin waxaan qabaa in marka la barbardhigo kooxaha kale, suuragal ma noqon karto, sababtoo ah waxaan tartankan ka nahay dhalinyaro”.
Inkastoo ay kooxda Manchester City guul ku soo gaartay 3-2 meel ka baxsan garoonkeeda kulankii lugta hore, hadana Pep Guardiola ayaa ka digay inay sahashadaan kulanka lugta labaad.
Dhinaca kale macalinka reer Spain ayaa ku baaqay kadib ka harista tartankan kooxaha Real Madrid iyo Paris Saint-Germain, inay diirada saaraan ciyaarta caawa inkastoo ay kulankii lasoo dhaafay ay ku soo adkaadeen garoonka Schalke 04.
“Waxaa dhiman 90 daqiiqo ee u baahan in la qabto shaqo adag, wali waxaa ina hor taala shaqo loo baahan yahay inaan qabano”.
Macallinkii hore ee Man United, Louis Van Gaal oo ku dhawaaqay inuu ka fariistay kubadda cagta & Shaqada uu qaban doono
Muxuu ka yiri Zidane go’aankii uu markale dib ugu soo laabtay kooxda Real Madrid???